Immisa ayey ku kacaysaa barnaamijka kumbuyuutarka - Geofumadas
Luulyo, 2009 ArchiCAD, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Google Earth / Maps, GvSIG, IntelliCAD, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, dalwaddii Earth
Waxaan wax ka qorayay mowduucyo teknolojiyad waalli ah in ka badan laba sano, badanaa software-ka iyo barnaamijyadooda. Maanta waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursad aan ku sameeyo falanqeyn waxa loola jeedo ka hadalka softiweerka, iyadoo rajo laga qabo sameynta ra'yi, la muujiyo wanaagga iyo sida ay uga jawaabaan dakhliga dhaqaale iyo ereyada soo saaraya taraafikada internetka ugu yaraan marka la eego xayeysiinta adSense .
Software Tikidhada ku lug leh Booqashooyinka ku lug leh Dakhliga soo saaray
GIS kala cayncayn ah 78 512 2.32
dalwaddii Earth 30 215 0.03
Waxaan la tashaday Google Analytics, oo ku saleysan si sax ah 5-tii bilood ee la soo dhaafay, anigoo weydiinaya ka mid noqoshada ereyga muhiimka ah iyo codsanaya magaca shirkadda iyo barnaamijka ugu weyn. Wadarta booqashooyinka ereyada muhiimka ah waxay ahaayeen 113,953 oo wadarta guud $ 320.02 waxaa yimid keywords.
Waxaan ka fikiray post qoran entries ama kusalaysan guddi dhanka, marka laga reebo MapInfo, oo aan u lahaa in ay ku tiirsan yihiin baaris ah iyada oo loo marayo LiveWritter tan iyo taariikhda kama dhigna category a.
Waxaa xiiso leh in 61,420 ay ka dhigan tahay 54% wadarta booqashooyinka ka imanaya makiinadaha raadinta iyadoo la adeegsanayo ereyada muhiimka ah. Taas oo macnaheedu noqon karo in ka badan 50% booqdayaashayda ka imanaya Google inay u yimaadaan barnaamijyadan 11 dartiis.
Marka la isbarbardhigo wadarta dakhliga soo socda ee barnaamijkan 11, marka laga soo tago wadar ahaan ay soo baxaan ereyada muhiimka ah, waxaa lagu soo gabagabeynayaa in 47% ay ka timid halkaa.
Marka la eego jadwalka, waxaan u qeybin karnaa booqashooyinka u dhexeeya tirada boostada oo qoraal ah, tani waxay na siinaysaa awoodda jawaab-celinta ee barnaamijyadu ay ku socdaan gaadiidka waana tan miiska.
AutoCAD waxay ka jawaab celisay wixii aan ka hadlay, mahadsanid caannimadeeda waxayna aragtay mahadsanid tan, IntelliCAD ayaa ku jawaabeysa mar labaad. Kadib ArcGIS waxaa ku xigay Google Earth si loo xiro afarta hore.
Waa wax cajiib ah sida gvSIG ee deegaanka Hispanic uu uga fiican yahay Microstation. Oo daawan Manifold GIS dabada CadCorp, taas oo macnaheedu yahay maahan heshiis wanaagsan in laga hadlo barnaamijyada aan la shaacin ee ku saabsan dakhliga xayeysiinta laakiin waa guul in la helo qaadashada.
Si kastaba ha noqotee, wax ka qorida software-ka waa mid ka mid ah fikradaha bilowga ah ee boggan. Raadinta taraafikada ayaa fiicneyd, helitaanka habab Google AdSense waa faa'iido laakiin barashada wax cusub maalin kasta ... waa wax lagu qanco.
Post Previous" Hore Natiijooyinka 28 ee loogu talagalay qurxinta dabiiciga ah
Post Next Calaamadaynta dunida dhabta ahNext »
5 Jawaab ayuu ka bixinayaa "Immisa ayey ku kacaysaa barnaamijka ku yaal boggan"
Codsi hore, waxaan rajeynayaa in maalin uun ay ka farxiso.
Waa inaan kuu sheegaa inaan akhriyo bartaada marar badan. Iyo haa, Waxaan oggolahay in badan oo ka mid ah waxyaabaha aan akhriyey leedahay in la sameeyo oo la AutoCAD iyo Google Earth, inkastoo aan helay articles aad u xiiso badan oo ay ku jiraan barnaamijyada dhif ah, kaas oo, sababo kala duwan, Anigu ma aan qaadi xorriyad ay u soo dejisan ama inay kugula taliyaan dadka aan ogahay.
Bartaadaada sida ay iigu muuqato ii soo jeedin farsamo oo aad u xiiso badan (iyo sababta aan, faallooyinka shakhsi ahaaneed) ee soo bandhigaya falanqeyn xiiso leh oo ah barnaamijyada isticmaalka caadiga ah oo aan caadi ahayn. Dabcan, waxaad qaadataa wakhti aad ku ogaato iyaga, waxaan u maleynayaa ama waxay kuu soo dirayaan macluumaadka maadama ay tahay mid ku lug leh. Waa kuwee waa wanaagsan ila, sababtoo ah qofku doonayo in uu la wadaagto fikradaada ku saabsan alaabta iyo teknoolajiyada in kuwa kale u siin naga site a maqlay oo li'ida jirin agagaarka on pages badan, kuwaas oo mararka qaarkood aadan haysan waqti ay ku sameeyaan.
Iyadoo ku saleysan oo ay isku dayaan in ay fahmaan macnaha kama dambaysta ah ee blog ah, waa in aan fahmo waxa ay tahay advertising tigidhka ee aad noloshaada (oo aan qiyaasi waa wax weyn ma jiro) ama sida ku habboon waa in aad loogu talagalay. Waxaan dareemayaa aragtida ah in xaqiiqada barashada-waxbaridda ay tahay tan ugu qanacsan kiiskaaga, waana mid muhiim ah oo aan fiicneyn ama xun.
Waa inaan qirto inaan si dhib leh weligey u galin "xayeysiinta", ilaa ay ku habboon yihiin inay ogaadaan barnaamij ama shey. Taas ayaa igu hogaamineysa codsigan soo socda: (Waan ogahay inaanan ku quusin gudaha bogga, laakiin…) Miyaad dib u eegis ku sameyn kartaa badeecooyinka ugu fiican, kuwa badanaa loo isticmaalo iyo kuwa ugu casrisan marka loo eego GPS? Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado ra'yigaaga ku saabsan iyo qiimeynta si aan u ogaado waxa ay ku kala duwan yihiin waxyaabaha caadiga u dhexeeya alaabooyinka iyo guud ahaan howlahooda. Waxaan balan qaadayaa inaan arko xiriidhada aad kugula talineyso ... hahaha! :-))